Indlela yokuvula, ilebula kunye nefayile ye .shp kunye ne-Microstation V8i - Geofumadas
Indlela yokuvula, ilebula, kunye nefayile ye .shp kunye ne-Microstation V8i
Agasti, 2014 cadastre, Microstation-Bentley
Kule nqaku siza kubona indlela yokuvula, ukuyifaka kunye neleta ifayile ye-shp usebenzisa i-Microstation V8i, isebenza ngokufanayo ne-Bentley Imephu. Nangona ziifayile ze-archaic ze-16 bits, ubudala njengabanye -baninzi- kusuka kwizinwele zam, ziyakwazi ukuqhubeka zisetyenziswe kwisimo sethu sejelo. Kucacile ukuba le migaqo iyasebenza kwizinto ezibonakalayo ezinxulumene neminye imithombo yolwazi.
Ngolunye usuku ndathetha ngendlela, usebenzisa iMicstation V8, bangenisa, babhala kunye nendlela yokwenza ngqangi. Ngelo xesha ndasebenzisa ingcaciso ye-Microstation Geographics ye-2004, into endiyibonayo kukuba abaninzi bayayisebenzisa ngokunyaniseka okukhulu -okanye ukwesaba ukufuduka-. Kule meko siza kusebenzisa i-Microstation PowerView version Khetha i-Series 3, oku kungaphezulu okanye ngaphantsi okulinganayo nento eyayinguM PowerMap, ngexabiso elikufutshane ne-1,500 idola ilayisenisi engapheliyo.
Vula ifayile ye-shp
Ngezi nguqulelo akufuneki ukuba ungenise ifayile ye-shp, njengoko ifundeka ngokuthe ngqo, njengefayile kwimodi ye-master okanye njenge-reference.
Ngoko ke uhlobo lwefayile, khetha uhlobo .shp, ukuba zidweliswe kuphela iifayili yaloo hlobo. Njengoko ubona kulo itshati, Microstation V8i unako ukuvula kungakhathaliseki, iifayile uhlobo DGN, DWG, DXF iifayile iibhloko (.cel), leyo izithengisayo (.dgnib), kwakhona iinguqulelo AutoDesk DWG True (DWG ne DXF) SKETCHUP (.skp), phakathi kwezinye, kuquka DGN lingaba naliphi na ngomnqweno ulwandiso (Imfono .hid .rie ADM, njalo njalo)
Jonga idatha ye-dbf
Ifayile yohlobo lwe-shp inezinto zendawo, iqukethe ezimbini iifayile ezongezelelweyo ubuncinane: i-shx leyo ene-indexed kunye ne-dbf equle isiseko sedatha ehambelana nezinto zendawo. Ukongezelela, i-.prj equlethe ukubonakaliswa kunye nenkqubo yokubaluleka ibalulekile.
Ukubona iipropati zefayili ye-dbf, yenza oku kulandelayo:
Izixhobo> geospatial> imisebenzi yolwazi
Ukusuka kule phaneli, sikhetha i icon ye5 ebizwa ngokuba "yiPhononongo lwe-XFM".
Khumbula ukuba iimpawu ze-xfm zivela kwi-Microstation Geographics 2004, xa zisetyenziselwa i-xml idata yedatha kwizinto ze-vector njenge-evolution of link engenelo.
Ngelo xesha kwakusebenza kuphela kwiimpawu ezidalwe kwi-Geospatial Administrator. Ngoku kunokwenzeka ukuba ufunde naluphina ulwazi olusisiseko sedatha oluhambelana nento.
Ukudala amalebula, ukulungiswa okanye ezinye imisebenzi zendawo, kuyimfuneko yokuqala ukuvelisa imodeli. Oku akunakwenziwa kwi-workspace kwaye kubonakala ngathi -nangona akufani- kwi-AutoCAD layout.
Oku kwenziwa kanje:
Ifayile> Umphathi weMephu
Kuya kusibuza ukuba sifuna umzekelo ukuba wenziwe, sikhetha ukhetho ewe, kwaye luyongezwa njengento yokubhekisela.
Nale, i kwicala lasekhohlo lwe sokusebenza, apho ungajonga data ngohlobo kweklasi msebenzi wadala namanqanaba panel. Le modeli ixhasa iifayile zalo reference, iipropati imbono kunye nezinye iimpawu ezininzi uhlalutyo lwendawo kuqulunqwe ixeshana, geoprocesses (ujoyine phambana, ngaphandle ...), iinkcukacha uluhlu, ukukhangela zize ke, njengoko kucacisiwe apha ngezantsi: idibeneyo kwaye ibhalwe.
Ukwenza uhlengahlengiso, khetha ungqimba ngeqhosha le mouse lasekunene kwaye ukhethe u "Symbol ...". Kule meko, ndisebenzisa imephu epheleleyo ye-codastral, kuthetha ukuba iimpahla zikawonke-wonke ezinjengemilambo kunye nezitrato zinekhowudi ye-cadastral kwaye zimelwe njengeziza.
Makhe sicinge ukuba kwimephu ye-cadastral, ndifuna ukupenda i-grey-type type grey grey, kwi-orange i-real estate properties kunye ne-blue blue plot. Kule nto, kufuneka ndidale iiklasi ezintathu:
Ukhetho lokufuzisela "I-Thematic" ikhethiweyo, emva koko kudalwa udidi lokuqala, negama elithi Izitalato, ezinemeko ekhethwe kwi-WHERE TIPOPARCEL = I-1 itafile, njengoko kubonisiwe kwigrafu elandelayo. Iklasi inokuchazwa kombala, uhlobo lomgca, ubukhulu, ukucaca; Kule meko sikhetha umbala ongwevu. Ngendlela efanayo esenza ngayo kwiiplani zodidi lweRio eblowu kunye nodidi lwePropathi etyheli.
Nje ukuba inkinobho "Faka isicelo" ikhethwe, esi sisiphumo. Ndicebisa ukuba udlale kancinci kunye nezinye izinto ezinomdla, njengokudala iiklasi ngokusekwe kwizikhundla okanye ezinye izinto esiqhele ukuzibona kwiinkqubo ze-GIS.
Faka iileyile (ilebula) ukusuka kwi-dbf
Okokugqibela, ukuba sifuna ukuba iiplata zibe nelebheli. Umaleko ukhethwe ngeqhosha lasekhohlo lasekunene, kwaye "Ukufaka iilebheli ..." kukhethiwe, kwaye ipaneli iyavela apho siyakukhetha njengohlobo lwe "Byer" lokurekhoda, Uhlobo lokwenza okubhaliweyo, olubomvu, ukusuka kumqolo osisiseko Idatha ebizwa ngokuba yi-IDPARCELA kunye nokuba okubhaliweyo akujikelezwanga ngokobume beyelenqe (Isimilo esiLungisiweyo).
Kukho esinakho, umbhalo oguqukayo ukusuka kwi-dbf. Ngokuqinisekileyo, kunokwenzeka ukongeza iimihlaba ezizenzekelayo njengendawo yento, leyo, ngokungafaniyo nommandla ogcinwe, ichanekile kwaye ihlaziywa ngokuhlela iJometri.
Izakhiwo zokubhaliweyo kunye nezakhiwo zendlela yokugcina izitoreji zingagcinwa njenge xml, kunye kunye nokongezwa, okufana nezitayela ze-SLD. Oku kubizwa kwakhona kwaye kusetyenziswe kwezinye izalathisi okanye ngaphakathi kwenkqubo ehleliweyo kwi-VBA.
Okwangoku i fayile esiye sisebenzisana nayo i-shp kwaye ifundwa kuphela. Kodwa ngokulondoloza nje nge-dgn, iyakwazi ukulungiswa kwaye zonke iipropati zeenkcukacha ziya kuba kwi-xml efakwe kwi-schemas equlethwe.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukusetyenziswa kwe-GIS ukulawula nokukhusela iDengue
Post Next Zoba polygon in Microstation evela ExcelOkulandelayo "